Golaha Wasiirada Soomaaliya oo maanta ansixiyay Hindise Sharciyeedyo – idalenews.com
Golaha Wasiirada Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii joogtada ahaa, waxaana shirkan guddoominayay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Mudane Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid”.
Golaha ayaa maanta ansixiyay Hindise Sharciyeedyo gaaraya 8 una gudbiyay Baarlamaanka, waxayna kala yihiin Hindise sharciyeeda:
1. Guddiga Dib-u-eegida iyo Hirgelinta Dastuurka.
2. Xafiiska Gardoonka iyo Illaaliyaha Dadweynaha.
3. Dhismaha Maxkamadda Dastuurka.
4. Golaha Adeegga Garsoorka.
5. Guddiga Xaquuqda Aadanaha.
6. Guddiga Xuduudaha iyo Federaalka Dalka.
7. Sharciga Arrimaha Dibadda (Foreign Service Law). Iyo
8. Sharciga La-dagaalanka Argagixisada.
Dhanka kale gollaha ayaa warbixino ka dhegeystay Wasiirka Warfaafinta, Boostada, Isgaarsiinta iyo Gaadiidka mudane Cabdullaahi Ciilmooge Xirsi oo u soo bandhigay golaha heshiiskii ay dawladda Soomaaliyeed kula soo wareegtay maamulka hawada “Air Space”, iyo sidoo kale dib-u-howlgelinta wakaalada Boostadii dalka.
“Waxaan guul noo ah inaan 22 sano kadib aan gacanta ku dhigno maamulkii hawadeena ee ay in mudaa gacanta ku heysay laan kamid ah hay’adaha Qaramada Midoobay,” ayuu yiri Wasiirka oo tilmaamay in heshiiskaasi oo ka kooban 7 qodob dhawaana hirgali doona uu yahay guul weyn oo u soo hoyatay dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed.
Wasiirka ayaa sheegay in golahu dood dheer kadib isla ogolaadeen in dib-loo-howlgeliyo Wakaaladdii Hawlaha Maraakibta iyo Wakaaladdii Dekeddaha dalka, kuwaasoo uu sheegay in loo aqoonsaday inay laf dhabar u yihiin taabogelinta howlaha dekeddaha Soomaaliyeed.
Ugu dambeyntiina, wasiirka ayaa tilmaamay in heshiiska labaad uu ahaa dib-u-howlgelinta Boostadii dalka oo iyaduna burburkii dalka kadib aan shaqeyn, wuxuuna tilmaamay in heshiisyadan ay yihiin kuwo taariikhi ah ayna soo dhoweeyeen golaha Wasiiradu.
Axsaabta Siyaasadeed oo ku baaqay in Baarlamanka Soomaaliya loo daayo la xisaabtanka xukuumada